Cameron.....: June 2011
မင်း.... သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို သီဆိုမယ်ဆိုရင်
ကိုယ်ဟာ .... မင်းသီဆိုမယ့် သီချင်းအတွက်
လှပတဲ့ စာသားတွေကို သီကုံးပေးမယ့်သူ။
ကိုယ်ဟာ... မင်းကမယ့်ဇာတ်မှာ ထိမိတဲ့
“မင်းအတွက်” ကိုယ်...ဖြစ်ချင်ခဲ့သူပါကွယ်...။ ။
Posted by Cameron at 23:065comments:
မောင်လေးတာချီလိတ်ကပြန်လာတော့ အဒေါ်ကထည့်ပေးလိုက်တာ ကြက်ကြော် ကောက်ညှင်းပေါင်းနဲ့ ယိုးဒယားငရုတ်သီးထောင်း
Strand Hotel မှာ Rich Gem နှစ်ပတ်လည်ရှိုးပွဲလုပ်တုန်းက လာတဲ့ဧည့်သည်တွေကို ကျွေးတဲ့ လက်ဖက်သုပ်...။ ဂေါ်ဖီပြုတ်ရွက်နဲ့ပတ်ပြီး အဲလိုကြွေဇွန်းနဲ့တစ်လုတ်စာစီထည့်ထားတယ် အဲဒါကို အိမ်မှာ လုပ်စားကြည့်တာ
ဒညင်းသီးပေါ်ချိန် စေးထန်းနေလိုက်တာ....။ ပြုတ်ပြီးသားကိုဝယ်လာပြီး အိမ်မှာတစ်ခါပြန်ပြုတ် အအေးခံ အညှာလေးကိုဓါးနဲ့စိတ်ရှည်လက်ရှည်လှီးထုတ် ထုထောင်း ဆားဖြူးပြီး ဆီဆမ်းထားတာ...။ များများတော့မစားနဲ့ ကျောက်ကပ်ထိခိုက်တယ်...။
Posted by Cameron at 04:355comments:
ဆိုင်နံရံလေးကို ဟောဒီလို ရောင်စုံဒီဇိုင်းလေးပြင်ထားတယ်
ဒါက တခြားတဘက်ကနံရံလေးမှာ ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုး စာသားအမျိုးမျိုးနဲ့ လွယ်အိတ်မှာကပ်တဲ့ တံဆိပ်ဝိုင်းပုံ မီးထွန်းထားတယ်...
ရောင်စုံ crunchy လေးတွေဖြူးထားတဲ့ ဒိန်ချဉ်ရေခဲမုန့်
ပြည်လမ်းပေါ်က တော်ဝင်စင်တာ မြေအောက်ထပ်မှာရှိတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တန်းတွေထဲက ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်...။ ဒိန်ချဉ်ရေခဲမုန့်ဆိုင်လေးပါ....။ ဆိုင်နာမည်က “Frolik”တဲ့... “Frolic” မြူထူးဆော့ကစားသည် ဆိုတဲ့ စကားလုံးကလာတာပါ...။ ရေခဲမုန့်ကတော့ ဒိန်ချဉ်တစ်မျိုးတည်းပဲရပါတယ်...။ အပေါ်ကကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Topping လေးတွေကိုသာရွေးရတာ...။ အပေါ်မှာပြထားတဲ့ ခွက်က original ပါ အလတ်စားပေါ့... Jumbo size ရှိသေးတယ်.... အော်ခွက်ထက်သေးတဲ့တစ်ဆိုဒ်လည်းရှိပါသေးတယ်...။ အလတ်စားခွက်ကတော့ နှစ်ထောင်ပေးရပါတယ်....။ Topping လေးတွေကတော့စုံပလုံစိနေတာပဲ ...။ အဲ... ဓါတ်ပုံမရိုက်လာမိဘူး...။ သူတို့ခွင့်ပြုမပြုတော့မသိဘူး...။ နောက်တစ်ခေါက်သွားစားဖြစ်ရင် မေးကြည့်ဦးမယ်...။ Chocolate Crunchy တွေပုံစံမျိုးစုံရှိတယ် နွားနို့နဲ့သောက်တဲ့ Corn Flake အရောင်စုံ ရယ်... သီဟိုဠ်စေ့ရှိတယ်... Almond ... မက်မွန်သီး... ဝေဖါမုန့် အပြင် ကြက်ဥခေါက်မုန့်လို အချောင်းလေးတွေလည်းရှိပါတယ်....။ ရေခဲမုန့်မကြိုက်တဲ့ ကျမတောင် အဲဒီဒိန်ချဉ်ရေခဲမုန့်ကို တော်တော်ကြိုက်သွားတယ်...။ အဲဒီနေ့က သူ့နှစ်ဆိုင်ကျော်က ချန်ပီယံကြက်ကြော်သွားစားပြီး အအီပြေဒိန်ချဉ်ရေခဲမုန့်ဝင်စားတာ...။ ကြက်ကြော်က သုံးတုံးကိုနှစ်ထောင်ကျတယ်....။ အဲ... ဒိန်ချဉ်ဆိုင်မရောက်ခင် Pizza Conner က take away ဆိုပြီး ချိတ်ထားတာတွေ့လို့ ...။ Hawain regular တစ်ခုပါဆယ်ကို ဒိန်ချဉ်ဆိုင်လာပို့ပါဆိုပြီးမှာခဲ့တယ်...။ ၀ိတ်လျှော့နေတယ်...။ အစားကြီးလှချေလား မထင်ပါနဲ့....။ အဟဲ......တကယ်လည်းစားပါတယ်ရှင်.....။ ကြိုက်တာကိုးလို့....။
Posted by Cameron at 22:597comments:
ကွန်ပျူတာကီးဘုတ်ပေါ် တချောက်ချောက်နဲ့ စာရိုက်ရလို့
Posted by Cameron at 01:196comments:
Posted by Cameron at 04:37 13 comments:
ညီမလေးကဆိုင်ကပြန်လာတော့ ဗိုက်ဆာတယ် ထမင်းနဲ့ဟင်းလည်းမစားချင်ဘူးတဲ့....။ ဒါဖြင့် ထမင်းလက်ဖက်သုပ် စားမလားသုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့... ကြက်ဥပါမိုးပေးဆိုလို့....။ ရေခဲသေတ္တာထဲက ချဉ်စပ်လက်ဖက်ကို ထမင်းပေါ်တစ်ဇွန်းလောက်ခပ်ထည့် ပဲဆီနည်းနည်းဆမ်း ဆားလေးဖြူးပြီး အားရပါးရ နယ်ဖတ်လိုက်တယ်... ပန်းကန်ထဲကို ပုံစံခွက်လေးနဲ့မှောက်ထည့်ပြီး ကြက်ဥ ဟက်ဖရိုက်မိုးပေးလိုက်တယ်...။ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ ကြက်ဥကတော့အမြင်မလှဘူး အဲလိုကျွမ်းတာ...။
မန်းလေးကို ညီမတစ်ဝမ်းကွဲလေး အစည်းဝေးသွားတက်ပြီးအပြန် ၀ယ်ခဲ့တဲ့ လက်ဆောင်ပါ....။ မချစ်စုပေမယ့် ရန်ကုန်မှာလို အမျှင်မများဘူး...။ စိန်တလုံးသရက်သီးအကြီးစားလားထင်ရတယ်....။ ချိုအီပြီး အသားလေးက ချောမွတ်နေတာ ကျောက်ကျောလေးအတိုင်းပဲ.......။ ခုတလော ညစာလျှော့စားနေတော့ အသီးကိုပဲ များများစားလိုက်တယ်...။ ဒါကြောင့် ဒီသရက်သီးတစ်ပွဲလုံးသည် မိုးငွေ့တစ်ဦးတည်းစားဖို့ပါ...။
အိန်ဂျယ်ရေ........ မင်းပြောတော့.............ကိုယ်ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ “ကဗျာလူ”ဆိုတဲ့ ကဗျာကိုကြိုက်တယ်ဆို......။ ကိုယ့်အက်ဆေးလှလှလေးတွေကို ကြိုက်တယ်ဆို.....။
တုန့်ပြန်မှုမရှိတဲ့ သူကို နှုတ်ဆက်စကားဆိုရင်း တိတ်တဆိတ်ထွက်လာခဲ့တဲ့ ခြေလှမ်းတွေ လေးလံနေလိမ့်မယ်...။ တိတ်ဆိတ်မှုတွေလွှမ်းခြုံနေတဲ့ ညဉ့်နက်နက်လာလေ.... အိပ်မရတဲ့ ညတွေပိုပိုရှည်လာတာကို သတိထားမိလာတယ်....။ ဘယ်တော့မှမီးထွန်းမထားတဲ့ အိမ်လေးဆီကို စမ်းတ၀ါးဝါးသွားဖို့ကြိုးစားနေမိတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လိုရပ်တန့်ရမယ်ဆိုတာ သင်ယူရဦးမယ်....။ ဘယ်လောက်ထိကြာအောင် သင်ယူရမလဲ ကိုယ်မသေချာသေးဘူး....။
ကိုယ့်နှုတ်ဆက်သံတွေကနွေးထွေးလှိုက်လှဲသလောက် သူ့တုန့်ပြန်စကားတွေက အစိမ်းရောင်တွေနဲ့ သုတ်လိမ်းထားတယ်.........။ အဲဒီအတွက် ခံနိုင်ရည်ကလည်းမရှိလိုက်တာ.....။ မျက်ရည်တွေက ဆရာမကြည်အေး မိုးကဗျာထဲကလို ပိုးပိုးပေါက်ပေါက်ခုန်ဆင်းကျလာကြတယ်.....။ ခရီးနှင်ခဲ့တာ အဝေးကြီးမို့ တစ်ကိုယ်လုံးလဲ ညောင်းညာနေအောင် မလှုပ်ချင်တော့ဘူး........။ ကိုယ့်ကို ရေတစ်ခွက်လောက်တိုက်ပါ.........။ ကော်ဖီဖျော်တိုက်ချင်လဲရပါတယ်....။ ကိုယ်....မင်းဖျော်တဲ့ ကော်ဖီသောက်ချင်ပါတယ်.........။ ဒါပေမယ့်လည်း ကံဆိုးမိုးမှောင်စွာပဲ ကိုယ်သောက်မယ့်အလှည့်ကျမှ ကော်ဖီကကုန်သွားပြီတဲ့............။
ရပါတယ်....ထားလိုက်ပါ........။ ကိုယ့်ဝဋ်ကြွေးနဲ့ကိုယ်ပဲရှိပါစေတော့.......။ အတောင်ပံတစ်စုံနဲ့ အမှောင်ထုတွေထဲကို ပျောက်ကွယ်သွားချင်လှပြီ....။ အစကတည်းက ရိပ်မိသင့်တယ်......။ မင်းဘက်မှာရှိတဲ့ အစိမ်းရောင်မြက်ပင်ရှည်တွေက မင်းရဲ့အရောင်ကို ကိုယ်စားပြုတာပဲ..........။ ဖျော့တော့တဲ့ ငွေမှင်ရောင်တွေက ကိုယ့်ရဲ့ချိနဲ့နှုံးခွေနေတဲ့နှလုံးသားအတွက် ကိုယ်စားပြုတဲ့ အရောင်....။ ပြုံးတစ်ခါ မဲ့တစ်လှည့်နဲ့ ကိုယ့်ကိုလဲ မျက်လှည့်ပြတတ်သေးတယ်.....။ မင်းကိုနားလည်ဖို့ ကြိုးစားပိုင်ခွင့်ကိုယ့်မှာမရှိပါဘူး...။ အမြဲမှိန်ပြနေတဲ့ မီးအိမ်ကလေးကို ကြယ်စင်တွေရဲ့ ထွန်းလင်းတောက်ပမှုနဲ့ ကိုယ်အမှတ်မရှိ လိုက်ရှာနေမိတုန်းပဲ..။ မဖြောင့်တဲ့ လမ်းကျဉ်းလေးက မကြာခဏပျောက်ပျောက်သွားတတ်လွန်းလို့ မနည်းသတိထားကြည့်နေရတယ်.....။ မှောင်ကလည်းမှောင်သေး....။ အမြင်အာရုံတွေေ၀၀ါးလာရင် ကိုယ်ခဏတော့နားရမယ်........။ တစ်နေရာထဲမှာ စုပြုံပြီး နာကျင်မှုတွေရောက်နေကြတယ်.........။ ဘယ်အနာကို အရင် ကုသမလဲလို့ ကိုယ်မစဉ်းစားပါဘူး..........။ လက်ချောင်းတွေ တစ်ကိုယ်လုံးညောင်းညာကိုက်ခဲတာတွေကို ကိုယ်မမှုပါဘူး.......။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ့်အကျီင်္ရဲ့ ဘယ်ဘက်အိပ်ကပ်အောက်က နုနယ်တဲ့ အရာဝတ္ထုရဲ့ နာကျင်မှုကို လိုက်မမီကြလို့ပါ..........။ သူ့ခင်ဗျာ.... ကိုယ့်ရဲ့ အသက်ရှင်ရပ်တည်မှုအတွက် ဒိုင်းတစ်ခုလို ကာကွယ်အုပ်မိုး အနှစ်နာခံ ရုန်းကန်နေရရှာတာပါ..........။
တစ်ကိုယ်လုံးကိုင်ရိုက်ခံထားရသလိုပဲ နာကျင်ပေမယ့်.......... ကိုယ့်ရဲ့ ဘယ်ဘက်ခြမ်း အရှေ့မြောက်ရပ်ဝန်းက အခန်းငယ်လေးတွေအတွက် ကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးတွေ လက်ချောင်းတွေ အလုပ်လုပ်နေရဦးမှာ.....။ ကိုယ်မအိပ်ချင်သေးပါဘူး.......။ အိပ်ပျော်သွားတော့ရော.... မင်းက အိပ်မက်ထဲလာမှာမို့လို့လား........။ ဟင့်အင်း ကိုယ်မထင်ပါဘူး မင်းလာမယ်ဆိုတာ.........။ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံး ရပ်တန့်သွားမယ့်နေ့....... ပင်လယ်ရေတွေ ခန်းခြောက်သွားမယ့်နေ့......... ဂီတသံစဉ်တွေအားလုံး ဆိတ်ငြိမ်သွားမယ့်နေ့......... ကောင်းကင်မှာ ငှက်ကလေးတွေ မပျံသန်းတော့မယ့်နေ့......။ ဟုတ်တယ် ... မင်းရောက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် အဲဒီနေ့တွေဖြစ်ပျက်သွားလိမ့်မယ်........။ အဲဒီမီးထွန်းမထားတဲ့ အိမ်ဆီကို ကိုယ်ဘယ်တော့မှ မသွားတော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချချင်တယ်..........။ အဲခါကျရင် အမှောင်ထဲကပုန်းနေတဲ့ မင်း.... ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက် ဘယ်လိုမှတ်ချက်ချမလဲ.....။ အားနာစွာနဲ့း( ဒီလိုမဲ့ပြမှာလား........။ ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို သဘောတူတစ်ဝက်မတူတစ်ဝက်နဲ့ မင်းစိတ်ကို ကိုယ်ခံစားမိနေတယ်.........(မှန်တယ်ဆိုရင် လက်ခုတ်တီးပြပါလို့ ပြောပိုင်ခွင့်လဲမရှိပါလား).... ဟူး....... ။
Posted by Cameron at 05:454comments:
တာချီလိတ်က အဒေါ်ပို့လိုက်တဲ့ မုန်ညင်းချဉ်တွေပါ......။ အထုပ်လိုက်အချဉ်တည်ထားတော့.... အရွက်လိုက်ဖြေပြီး ရေစင်စင်ဆေး....ပါးပါးလှီးပြီးပန်ကန်ထဲထည့်ထား....။ ကြိတ်ပြီးသား ကြက်သား (၁၀၀)ဂရမ်လောက်ကို အသားမှုန့် ပြောင်းမှု့န် ပဲငံပြာရည်ကြည် နဲ့ ဆီနည်းနည်းထည့်နယ်ထား....။ ကြက်သွန်ပါးပါးလှီး ဂျင်းလက်တစ်ဆစ်ကို အချောင်းလိုက်လေးလှီးထား...။ ဆီပူအိုးထဲကို ကြက်သွန်နဲ့ ဂျင်းထည့်ပြီး မွှေးလာရင် ကြက်သားထည့်ကြော်...။ ကြက်သားအညိုရောင်ဖြစ်သွားတဲ့အထိကြော်ပြီး မုန်ညင်းချဉ်ထည့်ကြော်ပါ...။ သကြားကို လက်ဖက်ရည်ဇွန်းနှစ်ဇွန်းလောက်ထည့် ဆားကိုမြည်းကြည့်ပြီးမှ
ထည့်ပါ... မုန်ညင်းချဉ်ကငံပြီးသားမို့....။ မုန်ညင်းချဉ်ကိုမခြောက်တခြောက် အနေထားထိ အဆက်မပြတ်မွှေပြီးကြော်ပါ...။
မုန်ညင်းချဉ်ကြော်ပေါ်ကို ငရုတ်သီးခြောက်ကြွပ်ကြော်လေးဖြူးပြီး ငရုတ်သီးကြော်လေးနဲ့ တွဲဖက်စားရင် သိပ်ကောင်းပါတယ်...
Posted by Cameron at 01:046comments:
မင်းရဲ့ ရိုးစင်းတဲ့ စကားလုံးနဲ့
Posted by Cameron at 21:263comments:
တီလာဗီးယားငါးနှစ်ကောင်ကို ခုတ်ထစ်ပြီးရေစင်စင်ဆေး ဆားနယ်ထား...။ ရေပွက်ပွက်ဆူတဲ့အိုးထဲကို ခရမ်းချဉ်သီးနှစ်လုံး လေးစိပ်စိပ်ထည့် .... စပါးလင်းဓါးပြားရိုက်တစ်ချောင်း... ပဒဲကော လက်တစ်ဆစ်ရိုက်ထည့်...ဆားနဲ့ ကြက်သားမှုန့်ထည့်....။ သုံးမိနစ်လောက်ပေးဆူပြီးရင် ငါးတုံးလေးတွေထည့်.... ငါးမိနစ်လောက်ထပ်ပေး ဆူလိုက်ဦး...။ အဲဒီချိန်မှာ မကျည်းမှည့်ကိုရေဖျော်ထား.... ။ ရှမ်းနံနံ နံနံပင် ငရုတ်သီးစိမ်း ပင်စိမ်းနဲ့ ဖတ်ဖိုင်ရွက်ကို ရေဆေးပြီး တစ်လက်မအနေထားလှီးထားလိုက်....။ မကျည်းရည်ထည့် အပေါ့အငံမြည်းပြီး အရွက်တွေအားလုံးကိုအုပ် မီးပိတ်လိုက်တော့....။
ဟောဒီလို ပဒဲကောနဲ့ စပါးလင်နံ့မွှေးနေတဲ့ ငါးချဉ်စပ်ဟင်းချိုရပြီပေါ့...အရောင်လေးကအဖြူတည်လေးပေမယ့် ချဉ်စပ်အရသာလေး ..။ ရှမ်းပြည်မှာဆို အဲဒီငါးဟင်းကို ကောက်ညှင်းပေါင်းနဲ့စားတာ အရေသောက်လိုက် ငါးအသားဖတ်တွေကို ပဲပုပ်မှုန့်နဲ့တို့စားလိုက်နဲ့ ဂွတ်မှဂွတ်ပဲ....။(ပဲပုပ်မှုန့်ထဲမှာက ရှမ်းငရုတ်ကောင်းလှော်နဲ့ ငရုတ်သီးပီနန်သီးအခြောက်ကို လှော်ပြီး ဆားအချိုမှုန့်ထည့်ထားပြီးသား အရသာရှိပြီးသားပဲပုပ်မှုန့်ပေါ့) ရှမ်းငရုတ်ကောင်းကိုတော့ ဒီမှာ သွားကြည့်လို့ရပါတယ်...။
Posted by Cameron at 09:524comments:
Posted by Cameron at 22:502comments:
ကိုယ်ခဏကလေး ကွန်ပျူတာစခရင်နဲ့ဝေးသွားတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ…..မင်းရောက်လာခဲ့တယ်….။ ခဏကလေးပါပဲ….. ကိုယ်ပြန်ရောက်လာချိန်မှာ မင်းရှိနေသလားမရှိဘူးလားတော့ မင်းကိုယ်တိုင်ပဲသိလိမ့်မယ်….။ မတွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့သူတွေ နှုတ်ဆက်လေ့ရှိတဲ့ စကားမျိုးမဟုတ်ဘဲ….. မင်းသိချင်တဲ့ မေးခွန်းလေးတစ်ခုကို မင်းဘာသာမင်းရွတ်ဆိုသွားတဲ့ စကားလေး……။ နှစ်ကြောင်းလောက်ပါပဲ….။ အမြဲတမ်းကိုယ်ယောင်ဖျောက်ပြီး လာတတ်တဲ့အတွက် မင်းကို ကိုယ်ပြန်ပြောလိုက်တဲ့ စာတစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းရဲ့ တုန့်ပြန်မှုကို ကိုယ်တိတ်တဆိတ် မျှော်လင့်နေခဲ့တယ်…..။ ဒါပေမယ့် မင်းဘာမှပြန်မပြောခဲ့ဘူး….။ မင်းပြန်ထွက်သွားသလား လိုင်းကျနေလို့လား ဒါမှမဟုတ် မင်းပုန်းပြီး…. ကိုယ်ကိုချောင်းကြည့်နေခဲ့သလား….....။
ကိုယ်လက်ချောင်းတွေ ကီးဘုတ်ပေါ်မှာ အဆင်သင့်လေးတင်ထားလျက်….. ပြန်မရောက်လာတော့တဲ့ မီးလင်းမနေတဲ့ မင်းနာမည်လေးကိုပဲ ကိုယ်တွေတွေလေး ငေးကြည့်နေမိတယ်…..။ စခရင်ဆေဗာမှာ ပူဖေါင်းလေးတွေ အရောင်စုံတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးတက်လာနေတယ်…..။ သိပ်မကြာခင် ကိုယ်ခလုတ်တစ်ခုခုကို မဖိလိုက်ရင် ကွန်ပျူတာလေး အမှောင်ကျသွားတော့မယ်…..။ မင်းလည်းအမှောင်ထဲ ပျောက်ကွယ်သွားမယ်….။ မဟုတ်ပါဘူး…. မင်းနာမည်လေးနဲ့ ဘောက်စ်လေး ပျောက်သွားလိမ့်မယ်…..။ တခဏလေးပါပဲ ခလုတ်တစ်ခုခုကို ကိုယ်လက်ချောင်းနဲ့ထိလိုက်ရင် ပြန်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာသိနေပေမယ့် အဲဒီတခဏလေးပျောက်သွားမှာကို ကိုယ်စိုးရိမ်နေတယ်….။
မင်းကပူဖေါင်းကြည်ကြည်လေးတွေနဲ့တူတာပါ…..။ ဟုတ်တယ်….. တို့ထိလိုက်မိရင် ဖေါက်ခနဲပေါက်ကွဲသွားမယ့် ဆပ်ပြာပူဖေါင်းလေးတွေနဲ့တူတယ်…..။ ဒါကြောင့် မင်းဟာ ကိုယ်အဝေးတစ်နေရာက တင်းတိမ်ရောင့်ရဲစွာ မက်မောတမ်းတရတဲ့ အိန်ဂျယ်လေးဖြစ်နေရတာလေ…။ ကိုယ်မင်းကို မတို့ထိရဲပါဘူး….။ ပူဖေါင်းလေးတွေလို ပေါက်သွားမှာစိုးတယ်ကွယ်….။ တကယ်တော့ မင်းနဲ့အနီးစပ်နိုင်ဆုံးဆိုလို့ ဟောဒီကွန်ပျူတာလေး တစ်ခုတည်းပဲရှိတာပါ……..။ မင်းကို ကိုယ်အရမ်း သတိရလွမ်းဆွတ်တဲ့အခါ မင်းဓါတ်ပုံလေးတွေကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်…. မင်းနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာ အဖြစ်ပျက်ဟောင်းတွေကို ပြန်ဖတ်နေမယ်….။ ပင်လယ်ပြာပြာနဲ့ ကြယ်စုံညတွေမှာ ဆိုညည်းပြခဲ့ဖူးတဲ့ မင်းသီချင်းသံချိုချိုလေးတွေကို ပြန်ကြားယောင်နေလိုက်မယ်…..။ ကိုယ့်အတွက်ဖြေသိမ့်နိုင်စရာ အကြောင်းအရာနည်းနည်းလေးပဲရှိပေမယ့် ကိုယ်အဲဒီနည်းနည်းလေးနဲ့ မင်းကိုရောင့်ရဲလိုက်ပါတယ် အိန်ဂျယ်…..။
Posted by Cameron at 23:005comments: